Cele News Archives - TheeSayChin
Category: Cele News
မြန်မာပရိသတ်တွေ မချစ်ပဲ မနေနိုင်တဲ့ Sinon Loresca က သူ့ရဲ့ ဘဝကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးသာ ဖြတ်သန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sinon Loresca က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေရင်း တစ်ဖက်မှာလည်း သူဝါသနာပါရာ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာပြည်သူ၊ပြည်သားတွေက Sinon ကို ပရဟိတသူရဲကောင်းကြီးလို့ အမည်ပေးထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sinon Loresca က အကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာမှန်သမျှကို အရောက်သွားနိုင်တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပီပီ ဘယ်နေရာမဆို သူကိုယ်တိုင်သွားပြီး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးသူတစ်ယောက်ပါ။ Sinon Loresca က မနေ့က ဇန်နဝါရီ်လ (၂၄) ရက်နေ့မှာတော့ လမ်းဘေးမီးပွိုင့်တွေမှာ စံပယ်ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးလေးတွေကို ကူပြီးဈေးရောင်းပေးခဲ့တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ Sinon […]
အလုပ်တွေကြိုးစားပြီး မေမေ့ကို ဆေးကုပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဘန်ဂျမင်
ဘန်ဂျမင်ကတော့ အလုပ်တွေ ကြိုးစားပြီး မိခင်ကို ဆေးကုပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။Myanmar idol ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ မိခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို သိခွင့်မရခဲ့ဘူး။ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲပြီးတော့မှ သိခွင့်ရလို့ အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်တဲ့။ပရိသတ်အချစ်တော် ဘန်ဂျမင်ကတော့ Myanmar idol(Season-4) ပြိုင်ပွဲကြီးပြီးကတည်းက ဂီတအလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူ ပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်အတွင်းမှာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အနီးကပ်ပြုစုခွင့်မရခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် အလုပ်တွေကြိုးစားပြီး မိခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်မယ်လု့ိ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ အမေက ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ နောက်ဆုံးနေ့ညက ပွဲလာကြည့်တဲ့ညပေါ့။ သူက အရမ်းပင်ပန်းရင် သိပ်အဆင်မပြေတဲ့ ဝေဒနာရှိတယ်။ အဲဒါကျွန်တော့်ကို မပြောပဲ Final ရောက်တဲ့ အထိ သူ မြိုသိပ်ထားခဲ့တယ်။ အခု Final ပြီးတော့မှ ကျွန်တော့်ကိုပြောတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ […]
အဘဆီ နောက်တခေါက်ပြန်လာပြီး မသန်စွမ်း သမီးလေးအတွက် Wheel Chair ထပ်လှူသွားတဲ့ Sinon
ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ် Sinon ကတော့ ဒီမနက်ခင်းပိုင်းမှာ အဘတို့မိသားစုဆီ အလှူအတန်းတွေသွားလုပ်ခဲ့ရုံတင်မကဘဲ အဘရဲ့သမီးလေးအတွက်ပါ Wheel Chair လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲ အသီးရောင်းတဲ့ အဘကို ရောင်းချခွင့်မရှိတဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းမဲ့ ရောင်းချတယ်ဆိုပြီး အသီးတွေဖျက်စီးပစ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုကြောင့် လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲသူတွေက ဂရုဏာသက်ကာ သွားရောက်လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်နေကြတာပါ။ သရုပ်ဆောင် ရွှေပိုးအိမ်ကလည်း အဘဆီကိုအရောက်သွားလှူဒါန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒုက္ခရောက် အခက်အခဲကြုံနေတဲ့သူတွေကို အမြဲကူညီနေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ် Sinon က အဘရဲ့ အိမ်ကိုအရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဘအတွက်လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ နွေးထွေးမှုအပြည့်အဝပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Sinon က ညနေ ၃ နာရီမှာ အဘဆီ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာပြီး အဘရဲ့သမီးလေး အတွက် Wheel Chair လှူဒါန်းမယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီမှာတော့ […]
စပွန်ဆာနဲ့ ဟိုတယ်ပေါ်မှာ ရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
မင်းသမီးချောလေး ပတ်ထရစ်ရှာက ချစ်စရာကောင်းပြီး နိုင်ငံခြားသူလေးတစ်ယောက်လို စတိုင်လ်ကျ လှပလွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ထရစ်ရှာက ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာ အခိုင်အမာ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်အားပေးကြပါတယ်။ အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ မနာလိုသူတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ဝေဖန်မှုတွေကို ကြုံရတဲ့ အနုပညာရှင်ပီပီ ပတ်ထရစ်ရှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း သတင်းအတုအယောင်တွေ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ခံရရှာပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ပတ်ထရစ်ရှာက စပွန်ဆာနဲ့ ဟိုတယ်ပေါ်က ဗီဒီယိုပေါက်ကြားဆိုတဲ့ သတင်းမှားနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။ပတ်ထရစ်ရှာက “? ဟာ… စပွန်ဆာကြီး Liam ရိုက်ပေးထားတဲ့ video တွေပေါက်ကြားကုန်ပြီ ?? ငါ့နှယ်လည်းကြုံလိုက်ရင်အဆန်းအကြယ်တွေပါအေ။ ငါကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ video clip […]
တေးသီချင်းမူပိုင်ခွင့်ကြောင့် မူပိုင်ခွင့်ရှိသူများအား သိန်း၅၀ကျော် ပေးဆောင်လိုက်ရတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
Myanmar Idol season 3ရဲ့ winner ဆုရှင် ဖြိုးမြတ်အောင်ဟာဆိုရင် ပရိတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အဆိုရှင် တစ်ဦးပါ။ ဖြိုးမြတ်အောင်က ခုဆိုရင်အနုပညာလမ်းကြောင်းကို ပုံမှန်လေး လျှောက်လှမ်းနေပြီး သီချင်းလေးတွေဆို ကြော်ငြာလေးတွေလက်ခံရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေး ပရိသတ်တွေအတွက် ဖြိုးမြတ်အောင်ကတေးသီချင်းမူပိုင်ခွင့်ကြောင့် မူပိုင်ခွင့်ရှိသူများအား သိန်းငါးဆယ်ကျော် ပေးဆောင်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖြိုးမြတ်အောင်က ခုနောက်ပိုင်းမှာ သီချင်းလေးတွေဆိုရင်း ကြော်ငြာများလည်း ရိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုများစွာရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးမြတ်အောင် က သူချစ်တဲ့ သီချင်းတွေဆိုရင်း သူချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးမြတ်အောင်ကစက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးအခွေ သင့်အတွက် မနက်ဖြန် solo album ကလည်းပရိသတ်တွေအရမ်းကို အားပေးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဖြိုးမြတ်အောင် က […]
“အမှုကို ကျေအေးပေးဖို့အစီစဉ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့ မိုးအောင်ရင်ရဲ့ချစ်သူဟောင်း ခင်မြတ်နိုး
သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ဟာ သိပ်မကြာခင်ကပဲ သူအကျဉ်းမကျခင်တည်းက လက်တွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူ ခင်မြတ်နိုးနဲ့ တရားဝင်လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေထက်ကနေ ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခင်မြတ်နိုးက မိုးအောင်ရင် မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ် ကာမလိမ်လည်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ ရုံးချိန်းတွေတက်ပြီး အမှုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ(၁၇)ရက်နေ့ရုံးချိန်းမှာတော့ ခင်မြတ်နိုးက သူမဘက်က ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီး ခုချိန်ထိလည်း သူမရဲ့သိက္ခာတွေရော အချိန်တွေေရော အများကြီးပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ မျှော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့် ဒီလောက်ထိ ရိုင်းမယ် ဒီလောက်ထိ လုပ်လိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့တာတွေကတော့ ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့တာပါလိုက ခင်မြတ်နိုးကပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ။ မိုးအောင်ရင် အကျဉ်းကျနေစဉ်ကလည်း သူမ အလုပ်လုပ်ရင် မိုးအောင်ရင်ကို သွားကြည့်ပေးမယ့်သူမရှိမှာစိုးလို့ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပဲ မိုးအောင်ရင်ကို တောက်လျှောက် သူမဘက်က လိုအပ်တာတွေ အမြဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။ မိုးအောင်ရင် အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရစဉ်ကလည်း မိုးအောင်ရင်ရဲ့မိဘတွေက […]
မင်းသားတစ်ယောက်လို စတိုင်လ်ကျနေတဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟောင်း ကျော်မင်းဦး
ကျော်မင်းဦးဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ယူ-၁၉ အသင်းကို သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဝင်ခွင့် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်အထိုင် ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်မင်းဦးက သူ့ရဲ့ ဒူးခေါင်းဒဏ်ရာကြောင့် ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူနေခဲ့ရာမှ ခွဲစိတ်ကုသပြီးတဲ့နောက် အခုဆိုရင် မြက်ခင်းစိမ်းတွေပေါ် ပြန်လည်ခြေချဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် မင်းသားတစ်ယောက်လို ရုပ်ရည်၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျော်မင်းဦးကို မိန်းကလေးတော်တော်များများကလည်း ကြိုက်နှစ်သက် အားပေးကြပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ကျော်မင်းဦးက ရှပ်အင်္ကျီအပြာရောင်လေးနဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်လို သန့်ပြန့်ခန့်ညားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုလေးပရိသတ်တွေအတွက် ကျော်မင်းဦးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ကျော်မင်းဦးက မြက်ခင်းစိမ်းပေါ် ပြန်လည်ခြေချဖို့ လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်နေသလို ကြော်ငြာအချို့ကိုလည်း လက်ခံရိုက်ကူးပေးနေလျက် ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ကျော်မင်းဦးကတော့ တစ်နေ့တစ်ခြား ချောမောလာတာပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း […]
အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံတင်ထားရတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင်ဦးဗေလုဝ
ယနေ့ အချိန်ထိ ဟာသ အနုပညာလောကမှာ နာမည်ကျော်နေပြီး အောင်မြင်နေစဲဖြစ်တဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ဗေလုဝကို ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ ကြိုက်နှစ်ကြမှာပါပဲနော်.။ ပရိတ်သတ်တွေကို ဟာသ ပျက်လုံးတွေနဲ့ အငြိမ့်သဘင်မှာ ဖမ်းစားထားနိုင်သလို၊ အနုပညာလောကရဲ့ ဟသ သရုပ်ဆောင်မှာလည်း ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာ အကြည်တော်ရဲ့ ဘီလူး ဆိုတဲ့ ဇတ်ကားကြီးဟာလည်း တော်တော်လေးကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ပိုင်းအရ ကြီးမြင့်လာသော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ သူတတ်မြောက်ထားတဲ့ အနုပညာနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပျော်ရွှင်စေသူဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဗေလုဝဟာ ဟာသအနုပညာနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို တင်ဆက်ယုံသာမက စာအုပ်စာပေများနဲ့လည်း အသိပညာများကို မျှဝေသူတစယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို စွယ်စုံ ရ အနုပညာရှင် ဗေလုဝဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့က ဦးနှောက် သွေးခဲပြီး ပင်လုံဆေးရုံမှာ ဆေးရုံတက် […]
ရွှေကြိုရွေးချယ်မှုအကဲဖြတ်ဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ မေသန်းနု နေရာတွင် အကယ်ဒမီမျိုးသန္တာထွန်း တာဝန်ယူမည်
၂၀၂၀ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲအတွက် ရွှေကြိုရွေးချယ်မှုတွင် အကဲဖြတ်ဒိုင်အဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် အကယ်ဒမီ မေသန်းနု နေရာတွင် အကယ်ဒမီ မျိုးသန္တာထွန်းက အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူသွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဒါရိုက်တာ ဦးညီညီထွန်းလွင်က ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အကယ်ဒမီ မေသန်းနုကို ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးက လိမ်လည်မှု ပုဒ်မ ၄၂၀ ဖြင့် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် အကယ်ဒမီရွှေကြိုရွေးချယ်မှုကို လာမည့် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် စတင်အကဲဖြတ်သွားမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှသိရသည်။ Credit စံတော်ချိန်,ဓာတ်ပုံ – မျိုးသန္တာထွန်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် UNICODE ၂၀၂၀ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲအတွက် ရွှေကြိုရွေးချယ်မှုတွင် အကဲဖြတ်ဒိုင်အဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် အကယ်ဒမီ […]
တစ်ယောက်ထဲရုန်းကန်ပြီး ရောဂါသည်သားဖြစ်သူကို ရှာဖွေကျွေးနေရတဲ့ အမေအိုကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Sinon Loresca
ပရိသတ်ကြီးရေ လတ်တလော လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေထက်မှာ လူကြီးလူငယ်မရွေး ဂရုဏာသက်ခဲ့ရတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ လူငယ်လေးတစ်ယောက် နှစ်သစ်ကူးအလှူအနေနဲ့ ငွေကြေးချို့တဲ့ရှာတဲ့ အဖွားအိုတစ်ယောက်ကို သူတတ်အားသမျှအလှူလေးလုပ်ပြီး အဖွားရဲ့နေအိမ်ထိ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပြီး အထီးကျန်ပြီးအဖော်မဲ့နေတဲ့ အဖွားအတွက် ကုသိုလ်လေးတစ်ခု ပြုခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာ မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပို့စ်လေးကိုမြင်ပြီး ပရဟိတ အလှူတွေမှာ အားတက်သရောပါဝင် လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ် Sinon က သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် ။ You are my first mission this Year 2020 mom. Thank you for your beautiful smile and you inspired usalot.. God Bless […]